कसले राख्यो पाकिस्तानको राजधानीमा 'भारतीय नेताको बयान भएको' ब्यानर? - Everest Dainik - News from Nepal
कसले राख्यो पाकिस्तानको राजधानीमा ‘भारतीय नेताको बयान भएको’ ब्यानर?
काठमाडौँ, साउन । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भारतको दक्षिणपन्थी दल शिवसेनाको ब्यानर टांगिएको पाइएपछि त्यहाँको प्रहरीले अज्ञात व्यक्तिहरूविरुद्छ मुद्दा दायर गरेको छ । यस क्रममा तीन जनालाई हिरासतमा समेत लिइएको जनाइएको छ ।
भारत सरकारले आफू प्रशासित कश्मीरको संवैधानिक हैसियतमा महत्त्वपूर्ण फेरबदल ल्याए लगत्तै उक्त ब्यानर राखिएका थिए । उक्त पोस्टरमा शिवसेनाका नेता संजय राउतको बयान लेखिएको थियो ।
उक्त बयानमा संजय राउतले आज जम्मु कश्मीर लागेको, भोलि बलुचिस्तान लिने र यसरी प्रधानमन्त्री मोदीले अखण्ड भारतको सपना पूरा गर्ने बताएका थिए ।
पाकिस्तानी राजधानीका धेरै भागमा यस्ता ब्यानर टाँसिएका छन् । प्रहरी र नगरपालिकाले तिनलाई हटाउने काम गरिरहेको छ ।
प्रहरीले यी ब्यानर कसले राखेको हो भन्ने अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। उसले अनुसन्धानका लागि सिसिटिभी फुटेज हेर्ने बताएको छ ।
बीबीसीले प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार यस्ता ब्यानर लगाएको क्षेत्र पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी इन्टेलिजेन्स ब्युरो र आइएसआईको प्रधान कार्यालय नजिकै रहेको छ ।
त्यस्तै रेड जोन भनिने उक्त क्षेत्रमा थुप्रै कूटनीतिक नियोगका कार्यालयका साथै विदेश मन्त्रालय समेत रहेको छ । धेरैले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सजिलै यस्ता ब्यानर टाँसिनु सुरक्षा चुक रहेको बताएका छन् ।
इस्लामाबादमा कुनै पनि ब्यानर झुन्ड्याउनुपहिले त्यसका लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । इस्लामाबादको स्थानीय प्रशासनले यस्तो कुनै पनि अनुमति नलिइएको बताएको छ ।
इस्लामाबादमा सरकार विरोधी र धार्मिक भावना भड्काउने खालका कुनै पनि प्रदर्शन सामग्री लगाउन प्रतिबन्धित रहेको छ ।
ट्याग्स: India poster in Islamabad